भरतपुरमा उल्टै किन थपिदैछ मतपरिणामको अन्योल ? - Everest Dainik - News from Nepal
भरतपुरमा उल्टै किन थपिदैछ मतपरिणामको अन्योल ?
२०७४, २७ असार मंगलवार
काठमाडौं,असार २७ । चुनाव दुई महिना बित्न लाग्दा पनि भरतपुर महानगरको मत परिणामको अन्योल किनारा लागेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबारको सुनुवाई पनि सारेपछि अन्योल उल्टै थपिएको छ । सर्वोच्चमा भरतपुर मतगणना विवाद मुद्धाको सोमबार सुनुवाई तोकिएको थियो ।
न्यायधिशद्धय ओमप्रकाशर मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त ईजलाले साउन २ का लागि पेसी सारेको छ । यसअघि न्याधीशद्धय मीरा खड्का र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त ईजलाले सोमबारका लागि पेसी सारेको थियो, नागरिकमा खबर छ ।